Rundown ပါဝင်သောစတူဒီယိုကိုသီးသန့်ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုခြင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2016 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2016 Douglas Karr
ဒီနေ့ငါတို့မှာaMartech Zone သီးသန့် - အတွင်းပိုင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှု Rundown အကြောင်းအရာစတူဒီယို!
Rundown သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည့် Apps များစုဆောင်းထားသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာစာသင်ခန်းနှင့်သင့်အဖွဲ့အတူတကွအလုပ်လုပ်ပုံကိုအတိအကျပြုလုပ်ထားသော Content Studio တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပထမနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ Rundown Apps သည်သီးခြား app များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုသာလိုအပ်ပါက၎င်းအတွက် app တစ်ခုရှိသည်။ ခွင့်ပြုချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုပါသလား။ အဲဒီ့အတွက် app လည်းရှိတယ်။ သင်၏ဗျူဟာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်မျှဝေရန်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာလိုချင်ပါသလား။ အဲဒီအတွက်အခမဲ့ app ရှိတယ်!
Rundown အက်ပလီကေးရှင်းများသည်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောပြproblemsနာများအတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြတ်သားသောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးတတ်နိုင်သောဒီဇိုင်းဖြင့် - တစ် ဦး လျှင်တစ်လဒေါ်လာ ၂၀ ဖြင့်စျေးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့များများသုံးလေလေ၊ သူတို့ပိုအလုပ်လုပ်လေလေပဲ။
များစွာသောယေဘူယျဖြေရှင်းချက်များနှင့်မတူဘဲအကြောင်းအရာအဖွဲ့များသည်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီး၊ Rundown Apps များကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ခြစ်ရာမှသည်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာပေါင်းစည်းမှုရှိ၊ မရှိ၊ ကျန်တဲ့သင့်ရဲ့ content တွေထုတ်လုပ်တဲ့ apps တွေထဲမှာ Rundown Apps တွေကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖွင့်ပြီးပိတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ပါဝင်သည့်အဖွဲ့သည်မည်မျှပင်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေသင်သည်သင်၏အသင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Content စတူဒီယိုတည်ဆောက်ရန်သင်လိုအပ်သည့် Apps များကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ များစွာသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအတူတကွအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသင်ပိုမိုအသုံးပြုလေလေ၊
Rundown App တိုင်း၏နောက်ကွယ်တွင်၎င်းတို့ကို MUSE ဟုခေါ်သည့် algorithms နှင့် Utility များပါဝင်သည်။ မီဒီယာအသုံးအဆောင်နှင့်အကြံပြုချက်အင်ဂျင်။ MUSE သည်သင်၏လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကူညီရန်အကြံပြုချက်များကိုနောက်ကွယ်မှအလုပ်လုပ်သည်။
MUSE သည်သင်၏အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုအလိုအလျောက်မွမ်းမံပေးပြီး၊ နောက်ကျမည့်အချိန်မတိုင်မီတစ်စုံတစ်ရာသည်နောက်ကျမည့်အချိန်ကိုဖော်ပြသည်၊ သင်၏အဖွဲ့ပေါ်တွင်မည်သူကိုသင်တာဝန်ပေးသင့်သည်၊ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်ခက်ခဲပြီးပျင်းစရာကောင်းသည့်အရာများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကြီးကျယ်သောအကြောင်းအရာများပြုလုပ်ရန်အာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အလုံးစုံသည်အေဂျင်စီများ၊ အကြောင်းအရာများစွာကိုထုတ်လုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မီဒီယာနှင့်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုတွင်လူ ၅ ဦး မှ ၁၀ ဦး ထက်ပိုပါက Rundown သည်သင်ယနေ့အလုပ်လုပ်နေသည့် spreadsheets များနှင့်ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများနှင့်ပြက္ခဒိန်များထက်များစွာပိုကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခမဲ့လျှောက်ထားရန် Rundown Apps!
Tags: အကြောင်းအရာစတူဒီယိုအားကုန်သည်Taulbee Jackson
9:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 17